10 Days Switzerland Travel avaiita | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Days Switzerland Travel avaiita
10 Days Switzerland Travel avaiita
Chitima Kufamba, Chitima Kufamba Switzerland, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 31/12/2019)
vafambi vaneshungu vanoziva kuti zvinokosha kuva urongwa hwakanaka. With Nyatsotarisa pamepu, yakasimba hurongwa zvokufambisa, uye Chikurukuru, anoshamisa mabasa - uri kuisa kwenyu 10 Mazuva Switzerland navi. Uye kana uri achipfuura Europe, chitima anogona kutora iwe kusvika kwese. Avo vanoda explorre Switzerland vanofanira zano nokuti nyika ine mukare zvinotyisa. Kana uchida rubatsiro kana kurudziro kuuya kwako, ngativei vane Kutarira 10 Mazuva Switzerland navi avaiita:
Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train The CHEAPEST Dzidzisai Tickets Website In The World.
Zuva 1 Of Your 10 Days Switzerland Travel avaiita – Geneva
Nzvimbo iwe kutanga rwendo rwenyu achizosiyana, asi akasiyawo inzwi nokuda kwoupenyu hwako mugare. Vafambi Most dzinorumbidza kutangira muna kana Geneva kana Zurich nokuti maguta makuru ndivo chokufambisa hubs. Chii chimwe, unogona kuedza avaiita ichi Kana uchida negotsi - chii zvichikosha kuti unakirwe!
Kana nenyika kutanga kupinda Geneva, pane vazhinji zvinhu kuona pazuva rako rokutanga Switzerland. Tinokurudzira achishanyira mishoni Old Town uye City Centre. Mukuwedzera, ari Treille Promenade uye United Nations chigaro vari zvakare zvikuru zvinotyisa.
Lyon kuna muBasel Zvitima
Zurich kuna muBasel Zvitima
Paris kuna muBasel Zvitima
Lucerne kuna muBasel Zvitima
Zuva 2 – Lake Geneva
Kutanga kuGeneva anokupa munhu mukana kuomerera kumativi Lake Geneva kwechinguva. Nokuti repiri kuSwitzerland, zvingava akakodzera kushanyira muguta Montreux, rakagumbatirwa pedyo kugungwa.
Ipfupi chete chitima tasva kure Geneva, uye zviripo achiona. Chii chimwe, avo vanoda Ages nematende richatsikwa vakafadzwa Chateau de chillon, uye vanoda hunhu Achawedzera nakidzwa mudziva.
Chur kuna Thusis Zvitima
Zurich kuna Chur Zvitima
Geneva kuna Chur Zvitima
Milan kuna Tirano Zvitima
Zuva 3 – Zermatt – The Alps, Siwizarendi
Kupedza nguva muSwitzerland asingaoni zvepanyama kunaka The Alps Zvaizova zvakafanana kuenda Gourmet resitorendi uye kwete yairayira chero zvokudya. Uye hapana chikonzero kuchipotsa kana ane mangwanani mangwanani chitima anogona kutora kuti Zermatt. kubva ipapo, uchinzvera yako Alps vanogona kutanga.
Pane zvakawanda zvokuita Zermatt kana ekunze inonaka zvakakwana. Tinoratidza kuti 3-awa kwidza akapoteredza madhamu shanu, kutangira Blauherd. Zviri yakaisvonaka kwidza uye nzira huru kutanga Alps wako ruzivo.
MuBasel kuna Interlaken Zvitima
Geneva kuna Zermatt Zvitima
Bern kuna Zermatt Zvitima
Lucerne kuna Zermatt Zvitima
Zuva 4 – Zermatt – Zvakare On Day 4 Of 10 Days Switzerland Travel avaiita
Unogona kutora zuva rako rechina kuongorora Zermatt zvakazara, sezvo izvi mumwe wevaya akanaka Swiss megomo maguta. Pane nakisa rwizi kuona, uye Matterhorn kuona. Kana iwe uri ruzivo muchakairi, unogona kutora masikati kuona Charles Kuonen Suspension Bridge.
For kuti, uchaita unofanira kuenda Randa, apo kwidza kune zambuko rinotanga. Zviri anenge 2-awa kwidza kuna zambuko. Haisi nyore muhwezva kupedza, uye zambuko pacharo hakusi kuziya komoyo. zvisinei, zvachiri zviripo dambudziko.
Zurich kuna St Moritz Zvitima
Zermatt kuna St Moritz Zvitima
MuBasel kuti Bern Zvitima
MuBasel kuna St Moritz Zvitima
Zuva 5 – Matterhorn Glacier
Kuti uwane Alps zvakazara, unofanira kutora mukana pamusoro dzakakwirira altitudes. Zermatt iguru pokutangira kuti, sezvo imi vaigona kusvika nyore zvose Matterhorn Glacier Paradise uye Gornergrat kubva ipapo.
Zvinotora zvimwe anosimudza kusvika kumusoro Matterhorn Glacier Paradise kana chitima rwokuToronto Gornergrat. vose ava zuva nzendo kupa naka maonero Alps, uye pane dzimwe kuongorora kuita kamwe uri ikoko, wo.
MuBasel kuna Chur Zvitima
Bern kuna Chur Zvitima
Turin kuna Tirano Zvitima
Bergamo kuna Tirano Zvitima
Zuva 6 – Schilthorn Siwizarendi
Nokuti rechitanhatu zuva renyu Switzerland avaiita, inguva kubata vamwe maonero zvakawanda zvinoshamisa kubva Schilthorn. Mha waya motokari kuti Schilthorn kubva Murren uye kunakidzwa zvose zvinofanira kupa. A kutenderera resitorendi, zvizhinji kuona platforms, uye kunyange Bond World anogona zvose kuwanikwa pano.
Schilthorn zvakakwana mafomu zuva rose, asi kana uri kunzwa zvarisingazivi, tarisa Lauterbrunnen uyewo. Chinhu kwidza kuburikidza Vakamupfekedza mupata uzere musha ichimbomira duku uye maonero megomo nemapopoma.
Bern kuna Interlaken Zvitima
Lucerne kuna Interlaken Zvitima
Zurich kuna Interlaken Zvitima
Zuva 7 – Jungfrau nharaunda
Zuva 7 zvingava akakwana kuti nguva refu kushanya kwenyu Jungfrau nharaunda uye murambe famba Alps. Pane zvimwe musango dzakakurumbira mudungwe munzira unogona kutora Grindelwald. A waya Motokari inogona kutora kuti Mountain First, apo iwe vangadzidza mumwe zhinji iripo kungofamba mudungwe munzira.
Chimwe chezvinhu dzakakurumbira ndivo zvechokwadi ndiyo Bachalpsee Lake kwidza, iro riri reraundi rwendo kuti zvinotora kumativi 2 maawa. zvisinei, pane zvakawanda zvimwe zvinhu First, saka iva nechokwadi tinyatsoziva munharaunda zvakanaka.
Munich kuna Zurich Zvitima
Berlin kuna Zurich Zvitima
MuBasel kuna Zurich Zvitima
Vienna kuna Zurich Zvitima
Zuva 8 – Wengen
Paaiparidzira kwenyu zuva rechisere 10 Days Switzerland Travel kuongorora zvinogona Wengen, megomo taundi duku. Paaiva munharaunda, unogona pasura Mannlichen nokutora imwe waya motokari mugomo uye kungofamba vakaita mudungwe munzira. Kune vamwe intriguingly ainzi ndivo, dzakadai Royal Walk.
zvichida The Panorama Trail kubva Mannlichen kuna pieni Scheidegg ndiye vakawanda yevedza Poshi. rinopa maonero mumupata pazasi vatatu makomo akakurumbira - the Jungfrau, Mönch, uye Eiger. From pieni Scheidegg, tora chitima kudzokera Wengen.
Zurich kuna Wengen Zvitima
Geneva kuna Wengen Zvitima
Bern kuna Wengen Zvitima
MuBasel kuna Wengen Zvitima
Zuva 9 – Lucerne
Pedyo nomugumo yenyu 10 Days Switzerland Travel avaiita, uchaita kuda kuti nzira yako kunyika mumaguta. Nokuti rechi9 zuva, tinoratidza kushanyira Lucerne, sezvo ndiro guta akakwana kuti riongorore netsoka. Mushure vose musango, zvichaita kuva vaenzi kuti-famba migwagwa kundotsvaka zvisakamboonekwa kufanana Chechi St. Leodegar, Museggmauer uye Lion Monument.
Lucerne mukuru pedyo norwizi uye zvakawanda varipo akanaka. Uyezve, zviri kumisa guru rwendo rwako Zurich, apo unenge kuzviuraya kwako kushanya.
Lyon kuGeneva Zvitima
Zurich kuGeneva Zvitima
Paris kuGeneva Zvitima
Lucerne kuGeneva Zvitima
Zuva 10 – Zurich uye zuva redu rokupedzisira 10 Days Switzerland Travel avaiita
zuva rako yokupedzisira inofanira yakazara mumwe, uye Zurich ndiyo nzvimbo yakanaka kushandisa nayo. Shandisa nguva kuona yaro zhinji wenhoroondo zvisakamboonekwa, akadai machechi pamusoro Grossmunster uye fraumünster AND.
Zurich kunewo wakakurumbira zvitoro mumugwagwa pfupiro, saka iva nechokwadi chokuti iwe kutenga chinhu panguva Bahnhofstrasse. Famba kuburikidza Old Town uye vanonakidzwa kuongorora usati nekupi kumusha.
Chero sarudza kuita kuSwitzerland, zvauri kuita nguva hwako. Just yeuka kuronga mabasa ako, kutakura, uye urefu mutsigiri nokungwarira. Kuti kuchaita kuti yenyu zororo riri dzichikunetsa-akasununguka uye zvechokwadi chinozorodza, sezvo inofanira kuva.
MuBasel kuGeneva Zvitima
Lyon kuna St Moritz Zvitima
Zurich kuna Zermatt Zvitima
Switzerland iri nyika yakanaka mufambi ose anofanira kuona. Wagadzirira kuti 10 Days Switzerland navi? bhuku kwenyu chitima matikiti zvino regai pachako kuparadzwa kuburikidza runako!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Days Switzerland Travel avaiita” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-days-switzerland-itinerary%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / of kuti kana / uye mitauro / ja zvakawanda.
#traveleurope europetravel SwissAlps trainjourney Train Travel travelswitzerland
10 Kupfuura Kwakanaka Guta MuEurope
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Chakarebesa Train Panzendo In The World
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba France, Travel Europe